कुनै बेला नेपालमा कोरोना थिएन । त्यो नभित्रियोस् भनेर विमानस्थल र उडान सबै ठप्प पारियो । त्यो त्यति बेला आवश्यक थियो । तर, अहिले नेपालमा कोरोना छ र विदेशमा करीब करीब नियन्त्रणमा आइसकेको छ । अब त्यताबाट कोरोना आउने होइन, यताबाट जाला भन्ने डर छ । धेरैजसो विकसित देशहरूले कोरोनाको खोप व्यापक रूपमा लगाइसकेका छन् । उनीहरू पहिलो र दोस्रो खोप पूरा गरी अहिले बुस्टर डोजको तयारी गरिरहेका छन् । ती देशका पर्यटक नेपाल आउँदा तिनलाई क्वारेन्टाइन किन चाहियो ?
नेपालमा पर्यटन व्यवसाय नै चाहिँदैन भन्ने हो भने कुरा अर्कै । पर्यटन व्यवसायी ऋणमा डुबेर व्यवसाय छाड्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि ह्रास आइरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसायलाई जसरी पनि चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन ।
क्वारेन्टाइनको व्यवस्था होउन्जेल पर्यटन नेपाल आउँदैनन् । पाँच छ दिनका लागि आउने पर्यटक नेपाल घुमून् कि क्वारेन्टाइनमा बसून् । क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि खर्च भइहाल्छ । त्यसैले भ्याक्सिन लगाएका पर्यटकलाई पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ छ भने विनारोकतोक नेपाल घुम्न दिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनैपर्छ ।
देश विकास किन भएन[२०७८ असोज, २२]
कोरोना खेलाँची कि साँचीकै समस्या ?[२०७८ असोज, १७]